को हुन उपमेयरको उम्मेदवार उमा अधिकारी ? - Khojpatro
को हुन उपमेयरको उम्मेदवार उमा अधिकारी ? २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा बिद्यार्थीको तर्फ बाट सक्रिय भुमिका निभाएकी उमा २०६३ सालमा भएको अनेरास्ववियुको केन्द्रिय अधिवेशन बाट केन्द्रिय सदस्यको रुपमा समेत निर्वाचित भएर काम गरिन्
khojpatro १३ बैशाख २०७९, मंगलवार ०६:२५
भैरहवा । नेकपा एमालेको तर्फबाट सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको उपमेयरमा उमा अधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् । पार्टीले रुपन्देही जिल्ला कमिटी सदस्य उमा अधिकारीलाई उपप्रमुखमा उठाउने निणर्य गरेको हो । लामो समय विद्यार्थि राजनीतिमा सक्रिय अधिकारी नेकपा एमालेको युवा नेतृको रुपमा परिचीत छन् ।
अध्ययनको शिलशिलामा भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थि जीवन बिताएकी अधिकारीको तत्कालिन अनेरास्ववियुका नेता पार्थिवेन्द्र उपाध्ययसँग विहे भएपछि उनी नेकपा एमालेमा रहन पुगीन । उपाध्यय बिसं २०५१ सालमा निर्वाचित भैरहवाका लोकप्रिय नेता स्व धनपती उपाध्यायका कान्छा छोरा हुन् । अधिकारीको सासु आमा पुस्पान्जली उपाध्यय एमालेमा शालिन, सभ्य र सरल नेतृको रुपमा परिचीत छन् । जीवनभर पाटि जीवनमा काम गरेकी पुस्पान्जली पश्चिम नेपालमै चर्चित महिला नेतृ समेत हुन् । उनी यतिबेला पाटिमा सक्रिय नभएता पनि सासु ससुराको अधुरा कामको जिम्मेवारी पुरा गर्नेगरी उमा निर्वाचमा होमिएकी छन् ।
एक छोरीकी आमा अधिकारीले स्नातककोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरेकी छन्। २०५७ सालमा नेकपा एमालेको भातृसंगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यता लिएकी उमा २०६० सालमा अखिलको रुपन्देही जिल्ला कमिटी सदस्य र भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु कोषाध्यक्ष भएकी थिइन् । उमा सोही समयमा अखिलको अंचल कमिटी सदस्य हुदै महिला बिभाग प्रमुख समेत भएर काम गरिन् ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा बिद्यार्थीको तर्फ बाट सक्रिय भुमिका निभाएकी उमा २०६३ सालमा भएको अनेरास्ववियुको केन्द्रिय अधिवेशन बाट केन्द्रिय सदस्यको रुपमा समेत निर्वाचित भएर काम गरिन् ।
उमा भैरहवामा युवा र बिद्यार्थी माझ एकदमै लोकप्रिय रहेकी छन् । उमा नेकपा एमालेमा २ कार्यकाल क्षेत्रिय कमिटी सदस्य र २ कार्यकाल जिल्ला कमिटी सदस्य भइसकेकी छन् ।
उमाको खेलकुद क्षेत्रमा पनि उल्लेख्यनिय रुपमा योगदान रहेको छ । उनले रुपन्देही जिल्ला खेलकुद बिकास समितीको सदस्य हुदै लुम्बिनी खेलकुद परिषदको कार्यकारी सदस्य भएर काम गरि सकेकी छन् भने हाल रुपन्देही क्रिकेट संघको कार्यसमिती सदस्य रहेकी छन् । पाँच बर्ष अगाडीको निर्वाचनमा पनि उपमेयरको आकांक्षी रहेकी अधिकारीले यतिबेला भने पाटिबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् । युवा माझ लोकप्रीय अधिकारीको संसदीय यात्रा कहा सम्म पुग्छ त्यो भने भविश्यले देखाउला ।